Wednesday June 06, 2018 - 14:45:39 in Wararka by
Wararka ka imaanaya deegaanka Libooya ayaa sheegaya in qarax xooggan lala helay gaari nuuca ciidanka Xambaara ah oo ay wateen ciidamada Booliska ee sida Melleteriga utababaran ee GSU-da loo yaqaan.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa lagu dilay 25 askari oo katirsan ciidamada Kenya "Qarax mujaahidiintu labeegsadeen ciidamada saliibiyiinta Kenya oo ka dhacay inta udhaxeysa Libooya iyo Dhoobleey waxaa ku dhintay 25 askari, sedax askari oo qaraxa ka badbaaday mujaahidiinta ayaa toogasho ku dilay" ayaa lagu yiri war kasoo baxay Al Shabaab.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen jugta qarax xooggan kadibna ay sheedda ka arkayeen qiic iyo uuro madoow oo cirka isku shareertay, gaariga qaraxa lala beegsaday oo ahaa Nuuca Motobiishka loo yaqaan ayaa ciidamo ka daabulay degmada Dhoobleey ee Jubbada Hoose wuxuuna weerarku ku qabsaday wadada xiriirisaLibooya iyo Dhoobleey.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamo lugeynaya oo Al Shabaab katirsan ay goobta gaareen ayna daabusheen hubkii ay wateen ciidamada lagu laayay qaraxa.
Bil ka hor qarax ka dhacay duleedka Dhoobley ayaa sababay dhimashada 12 askari Kenyaan ah, wuxuuna qaraxaasi caro ka dhax abuuray shacabka Kenya oo dowladooda ugu baaqay in ay ciidamada kasoo saarto Soomaaliya.